ငွေနဲ့ပေါက်လို့ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ အပိုင်း ( ၁ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငွေနဲ့ပေါက်လို့ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ အပိုင်း ( ၁ )
ငွေနဲ့ပေါက်လို့ဘာသာမပျောက်စေနဲ့ အပိုင်း ( ၁ )
Posted by thihayarzar on Jun 1, 2012 in Creative Writing | 13 comments
ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ ကိုကြည်လွင်+မခင်အုံးမြင့် မိသားစုအကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်..သူတို့မှာ သားသမီး ခြောက်ယောက်ရှိပါတယ် .. အကြီးနှစ်ယောက်က အိမ်ထောင်ကျသွားလို့ မိဘတွေနဲ့အတူတူမနေတော့ဘူး …ကျန်တဲ့လေးယောက်ကတော့ မိဘတွေနဲ့ အတူတူနေတယ် .. သုံးယောက်ကကျောင်းတက်နေတုန်းပဲရှိသေးတယ် ..ကိုကြည်လွင်ဟာရိုးသားဖြူစင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်.. အရက် ဆေးလိပ် ကွမ်း လုံးဝ မစားပဲ သားသမီးတွေအပေါ်မှာ အလွန်တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် .. အသက်ငါးဆယ်လောက်အရောက်မှာတော့ ကိုကြည်လွင်ရဲ့ဘသကျဆုံးချိန်ကို ရောက်လာခဲ့တယ်… တစ်နေ့မှာ ကိုကြည်လွင် ခန္ခာကိုယ်တစ်ခြမ်း လေဖြတ်သွားပြီး အိပ်ယာထဲမှာပဲ ဘုန်းဘုန်းလဲခဲ့ရပါတယ် …
တစ်မိသားစုလုံးက ကိုကြည်လွင် လုပ်စာနဲ့ ဘ၀ရပ်တည်နေရတော့ မိသားစုစားဝတ်နေရေးဟာ တော်တော်လေးကျပ်တည်းသွားခဲ့ရပါတယ် ..ကိုကြည်လွင်ရဲ့ရောဂါကိုလည်း ရှိတာလေးထုခွဲရောင်းချပြီး ကုသပေးပေမယ့် ထူးခြားခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး.. မခင်အုံးမြင့် အနေနဲ့လည်း အိမ်ထောင်ကျတာကတည်းက ဘာလုပ်ငန်းမှ လုပ်ကိုင်ဖူးတာမဟုတ်ပါဘူး..ဒါပေမယ့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် ရပ်ကွက်ထဲမှာ အိမ်တကာမှာ အ၀တ်လျှော်လိုက် မိုးတွင်း ချောင်းမြောင်းထဲမှာ ကန်စွန်းရွက်ခူးလိုက် သူတစ်ပါးအိမ်ခြံဝင်းအတွင်းပေါင်းမြက်ရှင်းလိုက် စတဲ့ကျပန်းအလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ရပါတော့တယ်.. မခင်အုံးမြင့်ရဲ့ ကြိုးစားမှု လုံလ၀ီရိယတွေကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အချောင်လည်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ငါးပိရေနဲ့ကန်စွန်းရွက်တို့စရာကတော့ နပ်မှန်ခဲ့ပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကံဆိုးမသွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွှာ ဆိုသလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းတွေမှာကျရောက်ခဲ့တဲ့ နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့မှီခိုအားထားနေထိုင်ရာ အိမ်ဂေဟာ လေးကိုဖျက်ဆီးဝါးမြိုပစ်လိုက်ပါတယ် ….
မခင်အုံးမြင့်ဟာ လေဖြတ်ရောဂါနဲ့ အိပ်ယာထဲမှာဘုန်းဘုန်းလဲနေတဲ့ ကိုကြည်လွင်ကိုပြုစုနေရတာကတစ်မျိုး၊ မိသားစုစားဝတ်နေရေးကျပ်တည်းရတာကတစ်ဖုံ၊ နေအိမ်ပြိုလဲသွားတာက တစ်နည်းဆိုတော့ သောကအပူလုံး ကြိမ်မီးအုံးသလို မျိုးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်.. ရန်ကုန်မြို့အနေအထားအရ နေဖြစ်ရုံ အိမ်တစ်လုံးဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာတောင် တော်ရုံတန်ရုံငွေကြေးနဲ့ မပြီးမြောက်နိုင်ပါဘူး .. ကိုကြည်လွင်သာကျန်းမာရေးကောင်းနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ပြိုလဲပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်ရဲ့အပိုင်းအစလေးတွေနဲ့ ပြန်ဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တောင် ဖြစ်သလိုနေနိုင်လောက်တဲ့ အိမ်ကတော့ဆောက်နိုင်မှာပါ … ကိုကြည်လွင် အနေနဲ့လည်း စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါလိုရာမရောက်ခရီးမပေါက် ဖြစ်နေတဲ့အပြင် အသက်ရှင်လျက်နဲ့ ဘ၀သေသလို ဖြစ်နေပါတယ် .. နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြတဲ့ မိသားစုတွေကို လူမျိုးအသီးသီး ဘာသာစုံအသီးသီး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့မှ စွမ်းအားရှိသလောက် ကူညီထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုခဲ့ကြပါတယ်..ကိုကြည်လွင်+မခင်အုံးမြင့် တို့နေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာ လည်း အခြားဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့များမှ အလှူရှင်များလာရောက်ကူညီကြပါတယ် .အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ မရှိဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကို လူသားချင်းစာနာထောက်ထားပြီး ရိုးရိုးသားသားနဲ့ ထောက်ပံ့ကူညီကြမယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်သာဓုခေါ်စရာဖြစ်ပါတယ်…ဒါပေမယ့် ပွဲလှန့်တုန်းဖျာခင်းဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ တကယ့်စေတနာ အမှန်မဟုတ်ပါဘူး … အကျိုးလိုလို့ညောင်ပင်ရေလောင်းတာမျိုးဖြစ်နေပါတယ်….ကိုယ့်ဆီကပေးရင် သူ့ဆီကလည်းပြန်လိုချင်မှုတွေရှိပါတယ် … သူတို့နဲ့အမြင်တူ အကျင့်တူဖြစ်တဲ့ ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် …
အခုလည်းကိုကြည်လွင်တို့မိသားစုကို တစ်ခြားဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ကကူညီထောက်ပံ့မှုတွေလာရောက်ပေးခဲ့ပါတယ် … အစတုန်းကတော့ ဘာတစ်ခုမှ တောင်းဆိုမှုမရှိပဲ ပေးကမ်းကြပါတယ်..ကိုကြည်လွင်တိုကမိသားစုကလည်းလာရောက်ပေးကမ်းတဲ့အတွက် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ကျေးဇူးတင်မဆုံးရှိကြပါတယ်..နောက်တဖြည်းဖြည်း အပေးအကမ်းတွေများလာတော့ တောင်းဆိုမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်…သူတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကတော့ ခင်ဗျားတို့ကို အခုလိုကျွေးမွေးနေတာကျွန်တော်တို့ကကျွေးမွေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး..ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားက ကျွေးမွေးနေတာပါ.. ကျွန်တော်တို့ဘုရားကသူ့ကို အားထားယုံကြည်မယ့်လူသားတွေကို ဘယ်တော့မှ ပစ်မထားပါဘူး.. သူ့ရဲ့တန်ခိုးတော်နဲ့စောင့်ရှောက်နေတယ်..ခင်ဗျားတို့မိသားစုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လောလောဆယ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဘ၀အခက်အခဲပြသာနာတွေကို ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း အဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့အထိ ကူညီပါ့မယ် တဲ့ ….
သူများဘာသာတွေက ငွေနဲ့ ပေါက်လို့ ဘာသာ ဆွယ်နေချိန်မှာ ကိုယ့်ဘာသာကလည်း ငွေနဲ့ခြောက်လို့ ဘာသာမုန်းအောင် လုပ်နေတာလေး လည်း ပြောကြပါဦး ..
ဟိုတစ်နေ့ က တောင်ဒဂုံဘက်ရောက်တော့ ဘာသာမတူ သွေးချင်း တိုင်းရင်းသူ တစ်ယောက် ညည်းနေရှာတယ် .ကျွန်မတို့ဘာသာ လည်း မဟုတ်ဘဲ ရပ်ကွက်တရားပွဲ လုပ်ဖို့ အလူ အတင်းကောက်ခံနေလို့ဆိုပြီး ။ တစ်လ သုံးထောင် နဲ့ ခုနှစ်လ ထည့်ရမယ်ဆိုပြီး ရပ်ကွက်လူကြီးတွေနဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေက အတင်းကောက်နေလို့ မထည့်ရင်ပြဿနာ ရှာမှာစိုးလို့ဆိုပြီး … ဆိုတော့
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာ အခြေအနေကိုပြောရရင်
သူများ လာထောင်းမှာလဲ စိုးနဲ့……………….
ဘာသာရေးတွေကို အခြေပြုတဲ့ ကူညီ ထောက်ပံ့ မစ မှု့တွေဟာ နှောင်ကြိုးမဲ့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ…။
သူ့ဘာသာကို ကြိုက်အောင် လက်ခံအောင် ယုံအောင် – တနေ့ဘာသာဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ဘို့ရည်ရွယ်တာပေါ့…။
နယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလဲ အဲဒါမျိုးတွေ ပြောမကုန်အောင်ရှိနေပါတယ်။ အလုံးအရင်းနဲ့ ဘာသာပြောင်းနေကြပါတယ်။
အဲဒီတော့ ကျုပ်တို့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာမှာ အဲဒီကိစ္စအတွက် ဘာကာကွယ်ဆေးထိုးထားသလဲ…????
ဒဲ့ပြောရရင် ဘုန်းကြီးနှစ်သိန်းရှိပြီး –
ဘာ ဆို ဘာ မှ လုပ်မထားပါဘူး။
အဲဒီဘုန်းကြီးနှစ်သိန်းတောင် ပါမသွားတာ ကံကောင်း…..။
အခြား ဘာသာက ပစ္စည်းနဲ့ငွေကို လိုအပ်တဲ့သူ၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါး ကျပ်တည်းသူကို ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် စည်းရုံးသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လှူဒါန်းခြင်းကို ရယူခြင်းဖြင့် စည်းရုံးသည် မည်သည့် စည်းရုံးခြင်းသည် အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်မည်နည်း။ စဉ်းစားကြပါကုန်။
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာ အစစ်ကငွေတောင် မကိုင်ရပါဘူး။
လှုရင်လဲ ဘာအတွက်ကြောင့်လှုပါတယ်ဆို ပြောပြီးလှုရင် အဲဒီအတွက်ပဲသုံးရပါတယ်။
စည်းရုံးတာတွေ ခံနေရတာ များနေပါပြီ။
ဘယ်လိုမှမခံနှိုင်တော့ ကျွန်တော်တို့က ပေါက်ကွဲ။လူမိုက်ကြီးဖြစ်။
ဘယ်ဘာသာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး မပြောလို ပါဘူး..။ တခြားဘာသာဝင်တွေနဲ ကျွန်မ တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေရဲ့ ကိုယ့်ဘာသာတရားအပေါ်မှာ သာသနာပြန်ပွားလိုတဲ့စိတ်ထားတွေ က တော်တော်ကြီးကို ကွာခြားပါတယ်..။ဘုရားတည် ကျောင်းဆောက်တာ လောက်ပဲ သာသနာ ပြုတယ်ထင်နေကြတယ်.။ တောင်ထိပ်မှာ က စေတီပုထိုး တွေ ဖွေးဖွေးလှုပ်လို့..တောင်အောက်က ရွာကြတော့ ဘာသာခြား ဖြစ်သွားပြီ.။
ကျွန်မဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တွေမှာ စုန်းပြူးတွေ သိပ်များတယ်..။ တစ်ခြား ကိုးကွယ်စရာတွေ ကလည်း များမှ များ..။ ကိုယ့်၇ဲ့ဘာသာတရား အပေါ်မှာ သက်ဝင်ယုံကြည်တဲ့ စိတ်လည်းမခိုင်လေတော့ တခြားဘာသာတွေ၇ဲ့ ဆွယ်ယူမှု ကိုအလွယ်တကူ လက်ခံနိုင်တယ်…..။ အဓိက ကတော့ မိရိုးဖလာ ယုံကြည်သူတွေများနေလို့ပါ…။
တော်တော်လေးကို လွန်ဆန်ဖို့ခက်တဲ့ အခြေအနေမှာ တစ်ဘက်က ဝင်သိမ်းတာဘဲ ။ ဒီပုံအတိုင်းဆို ပရဟိတအဖွဲ့တွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာ အထက်စာပါ မိသားစုများအတွက် ထည့်စဉ်းစားပေးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ
ကောင်းလိုက်ကြတာဗျာ….ကျွန်တော်ဂေဇက်ဝင်ရကျိုးနပ်သွားတယ်။ ဒီနေ့ဖတ်လိုက်ရတဲ့ကွန့်မန်းတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာ ဒီလိုအသိတွေ..ဒီလိုခံယူမှုတွေရှိပါလား ဆိုတာသိလိုက်ရတော့ ကျွန်တော်ကျေနပ်သွားတယ်။
ဦးဦးပါလေရာရဲ့ ကိုယ့်ပေါင်ဆိုတော့ ကိုယ်လဲနာအောင် မထောင်းရက်…သူများလာထောင်းမှာလဲ စိုးနဲ့ဆိုတဲ့စကား တကယ်ကြိုက်တယ်ဗျာ….
ကျွန်တော်တို့ဘာသာမှာ ဘုန်းကြီး ရဟန်းတွေကို “သာ့သနာ့ဝန်ထမ်းလို့ အပီအပြင်မသိတာ…သိသလို လိုနဲ့ မသိတာဟာ အရမ်းနစ်နာတယ်။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းဆိုတာ…ဘုရားအဆုံးအမတွေ လူတွေသိအောင် ကျင့်ကြံနိုင်အောင် တာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေရသူလို့ မသိတာ။ အရမ်းနစ်နာတယ်။ နောက် သာသနာ ထွန်းကားတယ်ဆိုတာ….ဘုရားအဆုံးအမတွေ လူတွေထဲပျံ့နှံ့နေပြီး လူတွေကျင့်ကြံနေထိုင်ကြတာကို ခေါ်တာလို့ မသိတာ…………လူတွေက သာသနာထွန်းကားတယ် ဆိုတာ ….သာသနာ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ များတာ….အဲဒီဘုန်းကြီးတွေနေတဲ့ အဆောက်အဦးတွေ များတာ….ကောင်းတာ..ကိုခေါ်တာလို့ ထင်နေတာ………….သာသနာ့ဝန်ထမ်းတွေများပြီး …(၀န်ထမ်းတွေများပြီး) ၀န်ထမ်းအလုပ်မလုပ် ကြရင် နစ်နာမှုကို မတွေးတတ်တာ……….သာသနာဆည်းကပ်တာဟာ ..ဘုရားအဆုံးအမတွေ သိဖို့ ဘုရားအဆုံးအမတွေ ရဖို့လို့ မသိကြတော့ပဲ…..နောင်ဘ၀ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ အသိတွေ လုံးဝဦးစီးလာတာ……၀ါဆိုသင်္ကန်းလှူလိုက်ရင်…နောင်ဘ၀ငရဲမရောက်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် နောင်ဘ၀ ငရဲမရောက်ရေး.ဦးတည်ပြီး…အလှူခံသူ သင်္ကန်းလိုလို…..မလိုလို….သင်္ကန်းရောင်းပြီး ဖဲရိုက်ရိုက် အရက်သောက်သောက်….ငါ့လက်ထဲက သင်္ကန်းယူသူလက်ထဲရောက်ပြီးရောဆိုပြီး…နောင်ဘ၀ ဆိုတာကို အဓိကဦးတည်ပြီး ပေးလှူကြတာတွေ….ပြောရင်ကုန်မှာကိုမဟုတ်ဘူး။ အခြာဘာသာဝင်တွေက….အမျိုးသမီးလေးတွေက ခခယယနဲ့အိမ်ထဲတွေကိုလာပြီး တစ်ဦးချင်းကို တရားလိုက်ဟောတာ….ချိုချဉ်တောင်ပေးလိုက်သေး…….ကျုပ်တို့ဘာသာကတော့ တရားတပွဲ သိန် ဆယ်ချီပေးကြရ။။။ပေးကြ….စောစောက တချို့ဆို နှစ်ဆယ်မို့ မလိုက်ဘူးတို့ ဘာတို့တောင် သတင်းတွေထွက်………ကားအကောင်းစားကြီးတွေပေါ်မှာ ……………အဖွဲ့အစီးကြီးတွေဖွဲ့…….ဒေါသအကြီးစားတွေ….. ……..မှားရင်ခွတ်လွတ်ကြပါဗျာ…ဒါတွေဟာ ကျွန်တော်သိတာ…မြင်နေရတာ ဆိုတာတွေတော့ အမှန်ပဲ။”
အခြာဘာသာဝင်တွေက….အမျိုးသမီးလေးတွေက ခခယယနဲ့အိမ်ထဲတွေကိုလာပြီး တစ်ဦးချင်းကို တရားလိုက်ဟောတာ အတုယူစရာကောင်းတဲ့ အချက်ပဲ.။
ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ ဘာသာ ချဲ့ထွင်မှုမှာ
ဒီလို နည်းလမ်းတွေ ပါတယ် …
သူတို့က ဒီလို ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်နေသူတွေမှ ဒီလို နည်းလမ်းမျိုး သုံးတာ မဟုတ်ဘူး ..
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သာသနာပြုနေတဲ့ ပြည်ပ သာသနာပြု ရဟန်းတော်တွေကိုလည်း
ဒီလို နည်းလမ်းမျိုး သုံးပြီး သိမ်းသွင်း စည်းရုံးတာပဲ …
ဆိုလိုချင်တာက ငွေနဲ့ပေါ့ဗျာ …. ဒီထက် မိန်းမနဲ့ပေါ့ဗျာ …
ဒါက သူတို့ ဘာသာချဲ့ထွင်တဲ့ ကိစ္စ …
အဲ့ဒီလို ဘာသာချဲ့ထွင်တဲ့ ကိစ္စကို
လူသားချင်းစာနာမှု အဖွဲ့ထဲကို မရောယှက်ဖို့တော့ လိုတာ အမှန်ပဲ ..
ပြောရရင် မာသာထရီဇာ လိုပေါ့ဗျာ ….
ကျုပ်တို့ ဘာသာဝင်တွေ အနေနဲ့ကလည်း
လွယ်လွယ်ငွေနဲ့ပေါက်လို့ ဘာသာ အပျောက်မခံတတ်ပါဘူး ..
ကျုပ် ယုံတယ် ..
သို့ပေမယ့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်
ငွေကြေးကျပ်တည်းလို့ ဟိုဒင်းဟိုဟာ လုပ်စားရတဲ့ အဖြစ်တွေတောင် ရှိနေတယ်ဗျ ..
ဒီတစ်ချက်တော့ စဉ်းစားစရာ ….
အေးဓမြလား ဗျာ။သီဟရာဇာရေ တကယ်တော့ ငွေနဲ့ ပေါက်လို့ ဘာသာပျောက်မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးသာတိုးတက်နေမယ်ဆိုရင် ဒီလိုတွေဖြစ်လာပါ့မလား…တစ်ချို့ကလေးတွေ အဆင်မပြေလို့ကျောင်းမတက်နိုင်ကြဘူး … စာမတက်တော့ ခက်ပြီပေါ့ ပြောတိုင်းယုံ နည်းနည်းမြူဆွယ်ရင် ပါသွားတက်ကြတယ် … ၀င်ငွေတွေကောင်းနေရင် ဒီလိုတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး … မြန်မာနိုင်ငံကြီး အမြန်ဆုံး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါစေ .. ဆင်းရဲအပေါင်းမှ ကင်းလွက်ကြပါစေ ..
ထပ်ပြီးလိုအပ်တာက ပြင်ပမှာတင် ဘုရားမတည်ကြပဲနဲ့
နောင်မျိုးဆက် ကလေးတွေရဲ့ရင်ထဲဘုရားဘယ်လိုတည်အောင်လုပ်ဆောင်ကြမလဲ။
ဘာသာရေးကိုစော်ကားထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေလဲ အရမ်းများလာပြီဗျ။
ရင်ထဲတင်းလာပြီ။ဒီကောင်တွေပဲ စောက်ရှက်မရှိ နိုင်ငံတကာကို သနားအောင်ပြော
လုပ်ရင်တော့ လူသားမဆန်ဘူးဗျာ။စော်ကားထားတာလဲ နှပြားမတန်ဘူး။
ရွာဆူမှာစိုးရိမ်လို့ လင့်တွေ မပေးတော့တာ။အေးအေးနေကြပါဗျာ။
အထိကရုဏ်းဖြစ်ရင်တော့ မကျေနပ်ချက်တွေပေါက်ကွဲမှ ဗမာတွေလွန်တယ်မပြောနဲ့။